पूर्वी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय, साँझपख मेघ गर्जनसहित वर्षा
काठमाडौं । बिहीबार देशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन् । मनसुन भित्र्याउने वायु देशको पूर्वी भूभागमा सक्रिय हुन थालेकाले देशको पूर्वी तथा मध्य भागमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । ‘मनसुन भने अझै पनि भित्रिएको...
आँखाको रोग पालेर बस्‍न बाध्य बालबालिका र वृद्धवृद्धा
चितवन । आँखाको रोग लागेको थाहा नपाएर र परिवारका मानिसले बेवास्ता गर्दा समुदायमा ठूलो संख्यामा बालबालिका र वृद्धवृद्धा रोग पालेर बस्न बाध्य छन् । यी दुवै उमेर समूहलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन सहयोगी चाहिने भएकाले उपचारमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । तीन दशकदेखि आँखा उपचारमा सक्रिय भरतपुर आँखा अ...
धनुषामा आठ सिलिन्डर विस्फोट
काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२ कदम चोकस्थित गोविन्द मिष्ठान भण्डारमा करेन्ट सट हुँदा भएको आगलागीका कारण आठ सिलिन्डर विस्फोट भएका छन् । विस्फोटका कारण गोविन्द मिष्ठान भण्डारसहित सियाराम मिष्ठान भण्डार र ठाकुर मिष्ठान भण्डारमा क्षति पुगेको छ । बिहीबार बिहान २:४५ बजेतिर गोविन्द मि...
अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी उत्तर कोरिया भ्रमण
काठमाडौं । अमेरिकासँगको व्यापार युद्धका कारण सम्बन्ध चिसिएकै बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ पहिलो पटक उत्तर कोरियाको भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् । यो सन् २००५ पछिको चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको पहिलो राजकीय भ्रमण हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र उत्तर कोरियाली नेता किम जोन उमबीच चीनमा यसअघि...
मार्सी धानमा विषादी प्रयोग नगर्न कृषि ज्ञान केन्द्रको सुझाव
जुम्ला । मार्सी धानमा झारनाशक औषधि ‘ब्युटाक्लोर’ प्रयोग नगर्न कृषि विज्ञले सुझाव दिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र जुम्लाले सो विषादी प्रयोग नगर्न किसानलाई आग्रह गर्दै प्राङ्गारिक जिल्लाकै रुपमा पहिचान कायम गर्ने कार्यमा सघाउन किसानलाई आग्रह गरेको हो । लुकीछिपी धानबालीमा झारनाशक विषादी ब...
लोकसेवासम्बन्धि चारवटै निवेदन एकै इजलासमा हेरिने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहको विज्ञापनको विवादसम्बन्धी चार वटा रिट निवेदन एउटै इजलासमा राखेर हेरिने भएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले बुधबार आयोगको स्थानीयत तहको विज्ञापनसम्बन्धी सबै विवाद एउटै इजलासमा सुनुवाई गर्ने आदेश जारी गरेक...
हाहाकार भएपछि विद्यार्थी पानी बोक्न बाध्य
डडेल्धुरा । डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका-१० राईमा रहेको सहश्रलिङ्ग माध्यमिक विद्यालयमा केही महीना यतादेखि खानेपानीको हाहाकार भएको छ । विद्यालयमा खानेपानीको अभाव हुँदा विद्यार्थीहरु दैनिक घरबाटै खानेपानी बोकेर ल्याउने गर्दछन् । विद्यालयमा खानेपानीको आपूर्ति हुँदै आइरहेको साउरोडा खानेपानी योजनाको मुह...
१) टि २० क्रिकेट सबैभन्दा सानो उमेरमा अर्धसतक हानि विश्वक्रिर्तिमान राख्ने खेलाडी को हुन् ? सन्दिप जोरा २) क्रिकेटमा शतक हान्‍ने पहिलो नेपाली को हुन् ? पारस खड्का ३) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहिलेदेखि लागु भयो ? २०७५-०८-११ ४) फिफा वर्ष खे...
आँखामा दृष्टि खोस्दै प्रविधि, कसरी जोगाउने ?
काठमाडौं । प्रविधिले हामीलाई धेरै सहज बनाईदिएको छ । साना नानीहरु हुन् या ठूला व्यक्तिहरु अहिले अधिकांश समय कम्प्युटर,मोबाइल अत्याधुनिक प्रविधियुक्त टेलिभिजनको नजिक बसिरहेका हुन्छौं । निरन्तर यी र यस्ता प्रबिधियुक्त साधनले कामलाई सहजै बनाईदिएको छ । मानिसलाई विश्वसामु जोडिदिएको छ । आधुनिक प्रविधिको...
विश्‍वकप क्रिकेट : दक्षिण अफ्रिकामाथि न्युजिल्यान्ड चार विकेटले विजयी
काठमाडौं । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा बुधबार भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई ४ विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो । दक्षिण अफ्रिकाले न्युजिल्यान्डलाई दिएको २४२ रनको मध्यम लक्ष्य पछएको न्युजिल्यान्डले ४८ ओभर ३ बलमा ६ विकेट गुमाउँदै २४५ रन पूरा गर्‍यो । न्युज...
काठमाडौं । युरोप भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि पहिलोपटक संसद गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार सम्बोधन गर्न पाएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्न‍े समय माग गरिसकेकोले सभामुखले नियम उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराएपछि कांग्रेसल...
काठमाडौं । गुठी विधेयक खारेजको माग गर्दै राजधानीमा विशाल जनप्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले गुठी विधेयक ल्याउन लागेपछि जेठ ४ गते बुधवार गुठीयारहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा रहेको संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा व्यक्त गरेको भाषा अमर्यादित भएको भन्द...